Kedu ihe ụba pụtara? Nkọwapụta nke ụbụrụ ego
Malite mgbazinye ego Wiki volatility
Kedu ihe ụba pụtara?
Na volatility ọ bụ ebe mmegharị nke na-ekere òkè dị mkpa na akụ na ụba.
Ya mere, oge nke mgbanwe ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa. Mmiri na-emetụta ala ahịa, ọnụahịa ahịa, mmasị ọnụahịa ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ego mbak. Ọ bụ nọmba mgbakọ na mwepụ nke nwere ike ịgbanwe oge. Mmiri na-emetụta ndị chọrọ itinye ego.
Onye ọ bụla chọrọ ịmepe ego, dịka ọmụmaatụ, kwesịrị ịṅa ntị na mmepe o mezuru n'ọnwa gara aga. Mmasị mmasị nwere ike ịgbanwe mgbe niile. N'ihe gbasara ịgbazinye ego, ọ na-abụkarị ihe gbasara ọnụego ọmụrụ nwa site na mmalite. Otú ọ dị, mgbanwe nwere ike ime. A na-agbanwezi onu ogugu oge ugbu a kwa afo, karia maka ulo oru mkpuchi. N'ihi ya, ọ dị mkpa mgbe nile ịchegide anya na ọnụego ọmụrụ nwa. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwekwara ike ịchọpụta otú ọnụego ọmụrụ nwa si akpa àgwà n'oge ahụ.
Ndaghari a na-ekere òkè di mkpa n'uwa ulo oru ego ma otu kwesiri inye ozi gbasara nke a. Onye nlekọta ụlọ akụ nke gị bụ kọntaktị kwesịrị ekwesị maka ajụjụ ndị dị otú a. Ụdị mgbanwe ahụ ekwesịghị ịdị oke oke. A ghaghị ilebara anya nke ọma anya. Ọ dịghị onye kwesịrị ile anya-acha anụnụ anụnụ ma bịanyekwa aka n'ihe ọzọ a na-eto. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị ga-ekwurịta ya ozugbo. Otú ọ dị, tupu i mepee ego, ọ ga-ekwe omume ịkọkwa ọdịda maka ọdịnihu. Ọ bụ ezie na uru a ezughị oke, ọ ka nwere ike iji. Ya mere ị nwere ihe ngosi ọ bụla ma chọpụta ihe ị na-abanye. Enwere ike ịtọ uru bara uru. N'adịghị ala, ihe egwu nwekwara ikere òkè dị mkpa. Enweghị ihe ọ bụla a ga-ahapụ na ohere, na mgbe niile ga-echekwa n'akụkụ niile. Ya mere, a ghaghị ileba uru a anya ma buru n'uche. Ọ bụrụ na ị maghị nke a, ị ga-ahapụ mkpịsị aka gị.
O doro anya na ị nwere ike ịnweta ozi na nchọpụta mgbe niile. Ịzụ ahịa dị mkpa na akụ na ụba, a na-echekwa ya na azụmahịa niile. Ọ bụrụ na ị bụ onye chọrọ ịchọta ego dị mfe, ị gaghị echegbu onwe gị banyere ime ihe ọbụla na ya. Otú ọ dị, ọ dị ezigbo mkpa maka onye na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ego ka a marakwa ya gbasara mpaghara a. A na-ekwu na ego buru ibu ka ọ na-akwụ ụgwọ, ọ ka njọ. Ị ga-agbakọọ ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ego ma ọ bụ nweta nkwekọrịta. Ya mere, ọ dị mkpa mgbe nile ka gị na onye nlekọta ụlọ akụ gị nwee nnọkọ. Nke a ga-akọwa ihe okwu a gụnyere maka adịghị ike. Ị ghaghị ile anya anya ma ghara ịbanye naanị ihe.
Naanị ndị na-agụ kpọmkwem mgbe e mesịrị enweghi anya. Ọ na-abụkarị oge na-agụ akwụkwọ nkwekọrịta na ịghara ịmekọrịta okwu ụfọdụ. Ya mere, ọ bara uru ịchọpụta ma hụ ihe niile n'ọdịnihu. Ọdịda ahụ abụghịkwa ihe mberede. Okwu a bụ ihe dị mkpa nke ego. Dị ka onye na-agbaziri nkịtị ọ dịghị mkpa.
Isiokwu bu nke aTrust iji